ADINGA UMKHULEKO AMAQEMBU ASEKZN ASENGOZINI YEZEMBE – Isambane News
Home > Featured > ADINGA UMKHULEKO AMAQEMBU ASEKZN ASENGOZINI YEZEMBE
April 18, 2018 Isambane News
Kubonakala umkhumbi ushona phansi kumaqembu aKwazulu-Natal adlala kwi Nfd njengoba izinto zingawahambeli kahle nokuyinto ezoholela ekutheni kube khona iqembu eligawulwa izembe.
Amaqembu asencupheni kuNFD singabala iRichards Bay ehlezi kunombolo 15 ngamaphuzu awu 28,kube iqembu loThongathi fc elihlezi kunombolo 14 ngamaphuzu awu 28 kuzogcina iRoyal Eagles ehlezi kunombolo 12 ngamaphuzu awu 29,ukuba sengozini kwalamaqembu ingoba imidlalo ewasaleli mincan kakhulu njengoba isimuthathu.
Iqembu le Richards bay esanda kuxosha umqeqeshi wayo ngenxa yokuphikwa imiphumela emidlalweni ewu 27 asebeyidlalile basanqobe ewu 6 badlala ngokulingana ewu 10 bashaywa kwengu 11 kanti inamaphuzu awu 28,amaqembu abasazodlala nawo iBlack Leopard, Ubuntu Cape Town kanye ne Mbombela United nokuyimidlalo lena okufanele beyinqobe ukuze bazisindise ezembeni.
Iqembu loThongathi fc emidlalweni ewu 27 abasayidlalile basanqobe ewu 5 badlala ngokulingana ewu 13 bashaywa kwengu 9,kanti amaqembu abasazodlala nawo Mbombela united,TTM,kanye nama Tuks,uma uThongathi lihluleka ukunqoba lemidlalo lokho kuyobe sekusho ukuthi babuyela kwiMotsepe league ekupheleni kwesizini.
Iqembu le Royal Eagles nalo lingelinye lamaqembu aseKzn alengelwa izembe nakuba kungakubi kubona kakhulu njengoba behlezi kunombolo 12 ngamaphuzu awu 29,kanti emidlalweni ebasalele kuyobaluleka ukuthi beyinqobe ukuze besinde ezembeni bephinde beqende endaweni engcono kuNFD ekupheleni kwesizini,imidlalo ebasalele bazodlala noBuntu Cape Town,Cape Town all stars kanye ne Witbank Spurs.
Konke lokhu sekulele kubadlali nakubaqeqeshi ukuthi besindise amaqembu abo ezembeni njengoba nabalandeli kufanele baqinise emkhulekweni ukuze amaqembu aseKzn ahlale kwi NFD.
English Language Day – 23 April 2018